Blogs: हाते ट्याक्टर खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु!! जनचेतनाको लागि share गरौँ!!
हाते ट्याक्टर खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु!! जनचेतनाको लागि share गरौँ!!
१ क्षमता - यसको क्षमता हर्स पावरको आधारमा नापिन्छ । बजारमा ४.५ - ९.० ह पा सम्मका ट्याक्टर पाइन्छन । थोरै जमिन, खुकुलो माटो, कमजोर शारीरिक अवस्था हुनेले सानो क्षमताको हाते ट्याक्टर खरिद गरेर काम चलाउन सकिन्छ । धेरै जमिन, समथर भुभाग, चाम्रो माटो भएमा र भाडामा लगाएर पनि पैसा कमाउने भए केही ठूलो क्षमताको खरिद गर्न सकिन्छ । तर नेपालको मध्य पहाडी भेकमा ६-७ ह पा क्षमताको खरिद गरेमा महिला पुरुष दुबैले चलाउन सकिन्छ । मध्यम तौल भएको हुदा खनजोत गर्ने बेलामा अग्लो कान्लोमा लैजान र झार्न पनि सजिलो हुन्छ । मूल्य पनि केही सस्तो पर्छ । यसलाई भाडामा लाउनको साथै सम्पुर्ण कामहरु...
ड्रागन फल (Dragon Fruit) खेती कसरी गर्ने? सबै जानकारी लिनुहोस्!
बबि बस्नेत, कृषि अधिकृत
बनस्पतिक विवरण:ड्रागन फल गर्मि र सुख्खा हावापानिमा हुने सिउडि प्रजातीको फलफुल हो।वैज्ञानिक वर्गिकरण अनुसार ड्रागन फल Cactaceae परिवारमा पर्दछ।यसको वैज्ञानिक नाम चाहिं Hylocereus Undatus हो। यसको स्तम्भ कमजोर भएकोले सपोर्ट आवश्यकता पर्दछ।यसको लहरा ड्रागनको जिब्रो जस्तै हुने हुदां यसलाई ड्रागन फल भनिएको हो।यस फलको स्वाद गुलियो र अमिलो पनाको मिश्रण भएको हुन्छ। फलको तौल २०० ग्राम -१.२ के.जी हुन्छ।यस फलको जातहरुमा रातो बोक्रा र् सेतो गूदी भयको,पहेलो बोक्रा र सेतो गूदी भयको,रातो बोक्रा र रातो गूदी भयको जात पर्दछ। उत्पत्ती र खेति विस्तारयसको उत्पत्ती दक्षिण अमेरिकाको मेक्सीकोमा...
तपाईलाई थाहा थियो? काफल खाँदा हुने रहेछ एती धेरै फाइदाहरु!!
काफल एक लोकप्रिय पहाडी फल हो । यो गर्मी याममा पहाडका वन पाखाहरूमा पाकेको हुन्छ । यसको फलको आकार लाम्चो र गोलो आकारको हुन्छ। यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ। यसको फलको रंग काँचोमा हरियो हुन्छ । पाकि सकेपछी रातो र धेरै पाकेपछि बैजनी रंगको हुन्छ । पहाड तिरका मानिसहरू गर्मी याममा काफलको रूखमा चढेर काफल खानमा तल्लिन रहन्छन् । काफललाई हामीले फलको रुपमा मात्र प्रयोग नगरेर यसलाई औषधीको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । थाहा पाऔ काफलका औषधीय गुणहरू… – कर्णशूलमा: काफलको बोक्राको काढा तिलको तेलमा पकाई तेल मात्र रहेपछी चीसो पारेर दुई तीन थोपा तेल कानमा चुहाए कर्णशुल र पीप...
नेपालको माटो नै रोगी , गर्ने के त ?
पोषणयुक्त माटोबाट उत्पादन भएको वस्तु उपभोग गरेमा मानव शरीरलाई आइरन र जिङ्क क्याप्सुल आवश्यक नपर्ने कृषि विज्ञको भनाइ छ ।नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, सल्फर म्याग्नेसियम, बोरन, जिङ, आइरन, मलेडिनम, कपर क्लोरिनलगायत १६ थरीका रासायनिक तत्व मिसिएको माटोबाट उत्पादन गरिएको खाद्यान्न खानाले मानव शरीरलाई कृत्रिम आइरन र जिङ चक्की आवश्यक नपर्ने उनीहरुको विश्वास हो । मानिसलाई जस्तै माटोलाई पनि पोषण तत्व चाहिन्छ । तर उत्पादन बढाउने निहुँमा माटोलाई दोहनमात्र गर्दा माटो रोगी हँुदै गएको छ । रोग लागेको माटोबाट उत्पादन गरिएको वस्तु उपभोग गर्दै जाँदा कालान्तरमा मानिस आफैँ रोगी...